ngu admin ngo 21-08-06
Ukwanda kolwazi malunga nokwamkelwa kwezitshizi ze-trigger kwimisebenzi eyahlukeneyo kuya kungqineka kuyindlela ebalulekileyo yokukhula ngexesha loqikelelo luka-2021-2031. Izitshizi ze-trigger zisetyenziselwa ukutshiza iintlobo ezahlukeneyo zolwelo. Ngokuqhelekileyo zenziwe ngeplastiki ye-polypropylene (PP). I...
Qalisa iMarike yesitshizi: Isishwankathelo
Ngokwengxelo yentengiso yamva nje epapashwe nguPhando lweMarike eNgaphandle kwimakethi yokutshiza ixesha lika-2021-2031 (apho ngo-2021 ukuya ku-2031 lixesha loqikelelo kunye no-2020 ngunyaka wesiseko), ubhubhani we-COVID-19 yenye yezinto eziphambili. uxanduva lokukhula kwe-trigger...
Ukuqwalaselwa nokuxoxwa kokusingqongileyo
Ndingathanda ukuthetha ngomba wangoku wokukhuselwa kokusingqongileyo. Kubantu abaqhelekileyo, ulwazi lokhuseleko lokusingqongileyo luye lwatshintsha kancinci ukusuka ekubeni buthathaka ukuya lula.Umzekelo, ukuhlelwa kwenkunkuma yemihla ngemihla, ukurisayikilishwa kwenkunkuma, ukonga amanzi nombane.Inkampani yethu nayo iminxeba...